WBO Zoonii Lixaa, Diinaraas: 'Marroo waliin galuuf erga waliigalle booda yaada jijjiirrate' - BBC News Afaan Oromoo
WBO Zoonii Lixaa, Diinaraas: 'Marroo waliin galuuf erga waliigalle booda yaada jijjiirrate'
25 Guraandhala 2019
'Ajajaa Itti Aanaan WBO Zoonii Lixaa' Hundee Dheeressaa, kan dhiyeenya kana waamicha araaraa fudhachuun gale, ammas taanaan dhimma dantaa Oromoo fi Oromiyaarratti cichinee qabsoofna jedha.
Hundee dheeressaa yookiin maqaa qabsoo Diinaraas jedhamuun beekama.
Gaafa Sanbata Xiqqaa Abbootii Gadaatiin simatamee gara Naqamtee erga imalee booda, kaleessa gara Amboo, buufata Leenjii Poolisoota Sanqallee buufatanii har'ammoo gara Xoollaayi imalaa jiraachuu BBCtti himeera.
Akkamiin akka waamicha abbootii Gadaa kana akka fudhate yoo ibsu, ''Waan fedhii ummataati, uummatatu barbaada. Dhimma Oromoorratti koottaa waliin sochoona jedhanii waan nu waamaniif, itti amannee araara fudhanneerra,'' jedha.
Koree teeknikaa ABO fi Mootummaa gidduutti araara buusuuf dhaabbate waliin wal argitanii mari'attanii murtee kanarra geessanmoo haala kamiin araara fudhattan? gaaffii jedhuuf wayita deebii kennu Diinaraas,
''Eeyyee, bilbilaan na dubbisaa turan. Isaan erga na dubbisanii booda animmoo miseensota na jala jiran waliin ergan mari'adhee booda murtee kanarra geenye,'' jedha.
'Gimbiidhaa ol natu ajajaa ture'
''Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa keessa socho'u bakka lamatti qoodnee hoogganaa turre.
Magaalaa Gimbii gaditti Jaal Marrootu ajaja. Gimbiidhaa olitti magaalota akka Naqamtee, Shaambuu, fi Shawaa Lixaa keessa waraana socho'ummoo natu ajajaa ture.
Bara 2007 ALI wayita qabsoon qeerroo Oromoo finiine gara Keeniyaatti imaleen achitti humna bu'uuressee, humna bu'uuressine qabadheen gara biyyaa deebi'e.
Inni waraana qabatee gara lixaa imale. Animmoo magaalaa Gimbii olittan hafe. Jaal Marroon ajaja Hayyuu Duree irraa fudhatee ajaja nuuf dabarsaa ture,'' jedhe Diinaraas.
Dhimma jaala isaa kanarrattis wayita yaada kennu Diinaraas, ''Qabsoon kan uummati barbaadu yoo ta'e waggaa dhibba tokkoyyuu keessa turuu dandeessa.
Karaa nagaadhaan qabsaa'uu qabna jedhee erga uummati dhaamsa dabarsee, uummataaf qabsoofna waan ta'eef dhagahuu qabna.
Nuti kanarratti hundoofneeti kan fudhanne. Ammoo yaadi namaa tokko miti, inni fudhachuus ta'e dhiisuus mala.
Garuu akka yaada dhuunfaatti osoo hin taane akka fedhii uummataatti deemuu qabna,'' jedha.
''Wayita waa'een araara kanaa dhagahamu yeroo jalqabaaf Jaal Marroo waliin mari'anne. Mari'annee erga galuuf walii gallee booda yaada jijjiirrate.
Akka waan nu cabsanii nu balleessuuf jedhaniitti mootummaarraa ibsi kennamaa jira waan ta'eef, dura dhaabbachuu qabna yaada jedhu wayita inni naaf kaasu waldhabne,'' jedha Diinaraas.
Madda suuraa, Marsaalee hawaasaa irraa
''[Marroon] mari'annee erga galuuf walii gallee booda yaada jijjiirrate.''
Murtee Marroo akkamin akka ilaalu kan gaafatame Diinaraas, ''Waan dubbatame sanarra dhaabatee, waan injifatamu wayii itti fakkaatee isarratti mufannaadhuma qabuun callisuu filate.
Irra-guddeessa xiqqoo waan namni jedhu fudhachuu irratti xiqqoo rakkoodha qaba. Isheedhuma kana rakkoon isaa malee waan biraa miti,'' jedheera.
Kana malees, ''akkan isa ilaalutti, jalqaba kaane wajjin turrutti amala kophummaadha qaba. Amala nama dhagahuutu keessa hin jirre xiqqooshi,'' jedha.
'Waraanni ajaja koo jala turan hundinuu deebi'aniiru'
Gaaffiifi deebii BBC waliin torbee darbe taasiseen Marroon, ''Waraanni 95% tahu bosona jira jedheera.''
Kan bosonatti hafe baay'eedhaa?'' jennee Diinaraas gaafanne.
Innis, ''[Waraanni hafe] kan bahe hin caalu. Lixarraa fakkeenyaaf kan bahe jira. Baharraas kan bahe jira. Horro Guduruu irraa kan bahe jira. Baay'inni iddoo kana hundarraa bahe kan laga jirani ni caala jechuu barbaadeeni,'' jedheera.
Waraanni ajaja koo jala turan hundinuu deebi'aniiru kan jedhu Diinaraas loltoonni irra jireessaan Horroo Guduruu Wallaggaa turan gammachuudhaan galaniiru jechuun dubbata.
''Waraanni gurmuudhaan guddaan Horroo Guduruu turan. Kaanimmoo Wallagga Bahaarra turan.
Isaan Horroo Guduruu guutummaatti galanii amma nama sadi qofatu hafa. Ka Wallaggaas galaniiru. Warra gara Lixaammoo ajaja hoogganaa fudhatanii deebi'uuf rincicaa jiru.''
Waa'ee ejjennoo waraana bosonatti hafeerratti wayita yaada kennu Diinaraas, ''Haga gaaffiin uummata Oromoo guutuutti deebi'utti hin gallu warra jedhaniidha.
Miseensonni keenya hidhamaa jiruu, maandhee hidhamaa jiruu, namni nu gargaaraa jiru hin jiruu, Abbootii qabeenyaatiin WBO gargaartan jedhanii hidhaa jiruu, Oromoorraa duuti hin dhaabbanne, hanga kun hundi dhaabbatutti hin deebinu warra jedhaniidha,'' jechuun ibsa.
Ajaji kun hayyu duree dhaaba keenyaarraa darbe, uummata Oromootiin deggerame waan ta'eef diduun sirrii miti kan jedhu Diinaraas, ka deemaa turre ajajaan waan ta'eef garuma fuulduraattuu yoo ajaja walirraa fudhataa hin deemnu ta'e rakkoodha jedha.
''Kun waan sirriitti jiruudha. Akkan beekutti iddoo lama sadiitti uumameera.
Ammayyuu kan qabamanii hidhamaa jiran ni jiru. Waanti waldhibdee uumu kaayyoon gargar ta'uu osoo hin taane, ajaja fudhataniitu walirratti ka'aa jiru,'' jedha.
'Qabsoo Oromoo keessatti kallattii naa danda'amen qooda fudhachuu fedha'
Kaayyoo fi ejjennoo isaanii ajaja abbootii gadaa fudhachuun fedhii uummata kanaa waliin imaluudha kan jedhu Diinaraas, ammas taanaan waan Oromoo fi Oromiyaan barbaadurratti cichinee qabsaa'uuf deemna jedheera.
Hojii biraa fedha. Qabsoo Oromoo keessatti garuu kallattii naa danda'amen qooda fudhachuu nan fedha.
Simannaa WBO: 'Koreen araaraa, waraana na jalatti diigaa jira'
21 Guraandhala 2019
WBO Zoonii Kibbaa: "Xalayaa fuula tokkoon qabsoo diignee galuu hin dandeenyu"
Simannaa WBO: Miseensonni koree araaraa waraana simachuuf Wallaggatti imalan 'butaman'
Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Marroo: 'Walitti bu'insi gama lachuunu bu'aan argamsiisu tokkollee hin jiru'
'Qabsoon dhaabaa akka barbaadamutti hin deemne jedhanii hin taa'an'- Obbo Galaasaa Dilboo
13 Adooleessa 2021
Dhakaan gati-jabeessi doolaara mil. 100 baasu tasa man-duubeetti argame
Chaayinaan dirree kuusaa Misaa'elii ijaaraa jirti - Saayintistoota
Haleellaan humnooti Tigraay baqattoota Eertiraarratti raawwatan akka dhaabbatu US gaafatte
'TPLF aanaalee Affaar sadii qabachuun jiraattoonni hedduun qe'eerraa buqqa'an'
Keeniyaafi UKn al-Shabaab waliin loluuf waliigalteerra gahan